Walmorkiin Hidha Guddichaa kaleessa jalqabame
Walmorkiin Hidha Guddichaa kaleessa jalqabame Featured
Guyyaa dhagaan bu'uuraa hidha guddichaa haaromsa Itoophiyaa kaa'ame sababeeffachuun waggaa waggaadhaan guutuu biyyaatti sirnoota adda addaatiin kabajamaa tureera. Baranas yeroo jahaffaaf kaleessa kabajamuu jalqabeera.
Haala kanaan kaleessa taphawwan ispoortii kubbaa Kaachoo, Kubbaa Saaphanaafi dorgommiin Biskileetaa kan adeemsifaman yoo ta'u, walmorkiin kubbaa miilaa ammoo adeemsifamaa jira.
Dorgommiin Biskileetaa kiiloo meetira 40 Dilbata darbe magaalaa Finfinneetti kilaboota magaalaa Finfinnee jidduutti kan adeemsifame yoo ta'u, Humni Ibsaa, Akkaadaamiin Ispoortii Dargaggootaafi Kutaan Bulchiinsa Magaalaa Yekkaa mo'ataniiru.
Walmorkiiwwan Kubbaa Saaphanaa, Kubbaa Kaachoo, Bunyaafi Kubbaan Miilaa ammoo dirreewwan ispoortii adda addaa magaalaa Finfinneetti guyyaa guyyaadhaan adeemsifamaa jiru.
Walmorkiin kubbaa miilaa adeemsifamu edda jalqabee kan baranaa wajjin si'a arfaffaaf ta'uun isaa kan beekamuudha.Walmorkii baranaa kanarratti kilabonni liigii piriimeerii Itoophiyaa afur jechuun Bunni Itoophiyaa, Bulchiinsi magaalaa Adaamaa, Arbaa Minciifi Faasiil kanamaa hirmaachaa jiraachuusaanii Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa beeksiseera.
Ittigaafatamaan waajjirichaa Obbo Wandimkun Alaayuu akka ibsanitti, guyyaa dhagaan bu'uuraa kaa'ame kana sababeefachuudhaan galii walitti qabuuf dorgommiin kun adeemsifamaa jiraa jedhaniiru.
Federeeshinichi kanaan dura yeroo sadi kilaboota liigii piriimeerii Itoophiyaa jidduutti dorgommii dhuma walfakkaatu qopheessuudhaan galii achirraa argamu waajjira hidha guddicha haaromsa Itoophiyaaf kennaa turuusaas Obbo Wandimkun addeessaniiru.
Akkaataa sagantaa federeeshinichaatiin qabxiin isaanii nudhaqqabuu baatus kaleessa bulchiinsa magaalaa Adaamaafi Faasil Kanamaa, Bunni Itoophiyaafi Arbaa mincii waliin taphataniiru.
Walmorkii adeemsifaman kanaan kilaboonni mo'atan iftaan waancaaf kan taphatan yoo ta'u, kanneen mo'aman ammoo sadarkaa sadaffaa argachuuf akka taphatanis beekameera.
Badhaasni meedaaliyaa warqii 30, meetii 30fi nahaasa 30 kilaboota tokkoffaadhaa hanga sadaffaa ba'aniif kennamuuf qophaa'aniiru.
Torban kana/This_Week 28802
Guyyaa mara/All_Days 1313313